Austin Koltonowski, Author at JURIST - News - Legal News & Commentary - Page 16 of 17
January 19, 2018 12:29:07 pm
The office of the US Attorney for the District of Columbia announced Thursday that it was dropping charges against 129 people arrested in the Inauguration Day protests, proceeding with charges against 59 defendants. During President Donald...
January 8, 2018 01:37:57 pm
The US Supreme Court on Monday blocked the execution of Georgia inmate Keith Tharpe, ordering the federal appeals court in Atlanta to examine claims that a juror voted for the death sentence because Tharpe was black....
US ends participation in UN’s global compact on migration
December 4, 2017 12:42:40 pm
US Secretary of State Rex Tillerson on Sunday informed the UN of the US' withdrawal from participation in the UN process to develop a Global Compact on Migration (GCM) The GCM is the first, intergovernmentally...
November 28, 2017 02:55:25 pm
The Arab Organisation for Human Rights in the UK (AOHR UK) on Tuesday called for the International Criminal Court (ICC) to investigate allegations of war crimes in Yemen by the United Arab Emirates (UAE)...
The High Court of Zimbabwe ruled Saturday that the military takeover that ousted ex-president Robert Mugabe was constitutional and not considered a coup. Last week the Zimbabwe African National Union Patriotic Front (ZANU-PF)...
November 21, 2017 02:40:52 pm
International Criminal Court (ICC) Chief Prosecutor Fatou Bensouda made a formal request on Monday to investigate alleged war crimes and crimes against humanity committed by U.S. military and the CIA. The proposed investigation focuses...
November 20, 2017 01:53:15 pm
The Zimbabwe African National Union Patriotic Front (ZANU PF) on Sunday demanded the resignation of 93-year-old Zimbabwean President Robert Mugabe . The document threatened that the ZANU PF, which has kept Mugabe in power for decades,...
HRW urges Guatemala courts to end due process delays
November 13, 2017 01:16:21 pm
Human Rights Watch (HRW) on Sunday urged Guatemalan courts to end unjustifiable delays in high-profile criminal cases. For the past decade, the International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG) , in partnership with the Attorney General's...